Akụkọ ochie anyị | BLI
Mụta Bekee ma ọ bụ French na Canada
Ndinam mme ndutịm emi okponde toto 1974Akụkọ ihe mere eme anyị
BLI (Bouchereau Lingua International) meghere akwụkwọ mbụ ya na 1976 na Montreal, Quebec. Ebumnuche ya bụ inye ọzụzụ maka ndị isi ụlọ ọrụ na ndị nchịkwa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na ebe ndị ọkachamara. N'oge na-adịghị anya mgbe ahụ, BLI malitere ịkwado ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa nile ka ha soro na mmemme nmikpu French na English.
Ebe ọ bụ na ọ kwadoro aha ya dịka ụlọ ọrụ nke nwere ikike, ihe ọhụrụ, na ọrụ ndị ahịa na-egosipụta ihe nlereanya, ụlọ akwụkwọ ahụ mesịrị zaghachi n'ọchịchọ na-arịwanye elu maka ọrụ asụsụ ma malite inye ndị ọrụ obodo na mba ụwa ọrụ nsụgharị ya, site n'aka ụlọ ọrụ ndị gọọmenti kwadoro .
Ndị ọrụ nkuzi raara onwe ha nye na nke mmụọ nsọ, yana ọnọdụ mmekọrịta dị mma na nke dị mma, bụ akara aka BLI, nke nwetagoro ogige ọzọ na isi obodo Quebec.
Ulo akwukwo anyi di na Quebec City na emepe uzo maka nkuzi umu akwukwo nke mba uwa n'asusu French.
Kemgbe ahụ, BLI nọ na-emelite usoro ya iji zute ụmụ akwụkwọ na-ebupute mkpa na ọdịmma ha. Ugbu a, BLI bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ asụsụ ndị kacha ewu ewu na ụwa ma na-enyekwa mmemme dị iche iche ahaziri ụmụ akwụkwọ si n'ọdịbendị na agbụrụ dị iche iche.
Na mpaghara ọrụ ụlọ ọrụ, BLI abụghị naanị na-aga n'ihu na-enye ọzụzụ asụsụ ahaziri iche kamakwa na-enyefe ọrụ asụsụ dịka ntụgharị, ntule, ihe omumu ihe, wdg. Ndị ahịa anyị gụnyere ụlọ ọrụ dị iche iche dị ka Deloitte, Coca Cola, Hydro Quebec, wdg.
Reasonsfọdụ ihe kpatara ịmụ akwụkwọ na BLIGịnị kpatara BLI?
40 afọ ahụmahụ
Ọkachamara na agụmakwụkwọ
Ọmụmụ akwụkwọ nke otu n'otu
Usoro Ọchịchị Kasị Mma
Ntughari di iche iche di iche iche
Mgbanwe mmalite ụbọchị
Obere klaasị na-enwe mmeri
Ndị nkụzi ruru eru
Usoro mmemme na-atọ ụtọ
Ebe abụọ na Canada
Mmemme na-acha ọcha
Montreal na Quebec City
Ebe nri gbara gburugburu, ụlọ ị ,ụ cafe na ije ihe akụkọ ihe mere eme gbara ya gburugburu
Akụrụngwa kachasị mma
Classlọ akwụkwọ klaasị nke ọgbara ọhụrụ
Ntinye uche onwe ya
Mmemme ahaziri iche
Mmemme asụsụ abụọ
Usoro mmụta dị elu
Kwa ụbọchị mgbe ọrụ ụlọ na ngwụsị izu gachara
Gbochie ọdụ ụgbọ elu ma kpochapụ
Nyere aka na Visa na CAQ
Mkpuchi mkpuchi ahụike mberede
Nhọrọ ụlọ dị iche iche
Nyocha asụsụ asụsụ ntanetị